Raadinta Love? Manspreading fure u noqon doonto in Success - Rule News
Raadinta Love? Manspreading fure u noqon doonto in Success
Isticmaalka videos iyo app shootali-style a, cilmi ayaa go'aamisay in dadka iskala soo baxay ayaa lagu soo jiidasho by-hawlgalayaasha kara
Maqaalkaan oo cinwaankeedu ahaa “Raadinta jacayl? Manspreading noqon kartaa furaha guusha, daraasad soo jeedisay” waxaa qoray Sample editor Science Ian, for The Guardian on Monday 28 March 2016 19.00 UTC
Marna ha xusuusan wadahadalka la dhalaalayay, urin nadiif ah iyo xusuusto magaca qofka. In dunida shukaansiga casriga ah, qarsoodi ah ay u guul tahay in ay qaataan meel.
Caaradda caadi helo jacaylka, ama lover ugu yaraan a, ka timaadaa cilmi Maraykanka kuwaas oo loo isticmaalo videos shukaansi xawaaraha iyo a Shootali-style app si ay u muujiyaan in qof ayaa lagu qiimeeyo sida ka badan oo soo jiidasho leh marka ay isu soo taagay.
Dadka kordhiyay torsos ay, saaray lugaha iyo faafin hubka ay ballaaran ayaa abaal marin xiiso jaceyl ka badan kuwa kale, u badan tahay sababtoo ah postures ku maldahan furfurnaanta iyo xukunkiisa, cilmi ku andacoonayaan.
Marka la barbardhigo, kuwa isku hunched, iyo gacmaha iyo lugaha ay u gudbeen, nabdoonaa liidata in dalab ay ku badiyeen hawlgalayaasha kara.
Natiijooyinka ayaa ka caawin kara dhibcaha ee singletons kan, oo wakhtiga shootali iyo goobaha shukaansiga online, waxay leeyihiin oo kaliya sacab muggiis oo sawiro iyo a seconds yar si uu u gudbiyo abaal aad u weyn in xiriir iyaga la, hubaal wakiil lahaa.
Warbixintan oo lagu daabacay ah Talaaboda of Academy Qaranka ee Sciences, Tanya Vacharkulksemsuk at the University of California, Berkeley, sharaxayaa sida iyada kooxda isticmaali video footage ka dhacdo shukaansi xawaare si ay u muujiyaan sida rag iyo dumar, kuwaas oo qaatay in ka badan postures "ballaaran" lahaa labada lamaane dheeraad ah oo ku codsan taariikhda dabagal ah.
Waxay raacay tijaabo on app shootali-style a. Saddex nin iyo saddex haween ah isku raaceen in ay laba profiles kala duwan abuuray iyaga, waayo,. Mid ka mid ah iyaga tusay in keenayo furan, sida ugu tiirsan tahay oo lugaha fidsan, ama kor u taagan gacmo oo ay ka ballaaran. In profile kale, waxay la ansixiyay keenayo "contractive", tusaale ahaan, by hunching kor, ama laabi gacmahooda iyo lugahooda gudbaya.
Vacharkulksemsuk uploaded profiles ka badan laba maalmaha fasaxa iyo duubay oo seefqaad ah danta ugu taataabtay. Sida saadaaliyay, ka postures more furan nabdoonaa ugu fiican marka la eego codsiyada si ay ula kulmaan ilaa. Mar labaad, Rag iyo dumarba ka faa'iideystey, inkastoo saameynta ahaa waaweyn waayo, raggii.
Qoraalka weriyey, cilmi wac splaying ee gacmaha iyo lugaha in photos shukaansiga online "xukuma, furo qaab aan hadal at eber yiqiin. "
"Iyada oo ku saleysan natiijooyinka urursaday ayaa ka kumanaan qof oo hal at ah dhacdo shukaansi xawaaraha dhabta ah, oo isticmaalaya codsiga shukaansi ah, Waa cad dahay in ballaarinta postural si weyn kordhin kartaa qofka fursadaha samaynta a xiriir jaceyl bilowga guul,"Waxay ku dar.
Vacharkulksemsuk shakiyo in kubad heysashadooda iyo furfurnaanta dadka more soo jiidasho leh sababta oo ah dadka xukuma muuqdaan wanaagsan ee goobta shaqada in la sameeyo iyo dadka u furan yihiin oo dheeraad ah diyaar in ay wadaagaan waxa ay leeyihiin ee nolosha.
Studies in xayawaanka kale soo jeedinaynaa dadka laga yaabaa in aanay si kala duwan. Vacharkulksemsuk sheegaye qaab kaas oo xoolaha u dhashay dambeyso iyo taranka. Saayiq Lab bandhig ay physicality by haraati iyo geesgees u ordaya, halka daayeerro, soo jiidan peahens by bandhigeen baadad badhidii ay.
Kulan qof iyada oo loo marayo qaab ka mid ah shukaansiga online ayaa noqday jidka labaad ee ugu badan ee loo helo lammaane, ka dib kulan dhex saaxiibo. Ku dhowaad dadka 91m u isticmaali casriga ah in ay wada-hawlgalayaasha ka heli, ku saabsan 70% kuwaas oo da'doodu u dhaxayso 16 in 34, qorayaasha qor.
"On dhufto ee sida, halkaas oo qaadan taariikh qof kale si caadi ah ku bilaabmaa sawir ama dhexgalka kooban, roon tahay in la ogaado sida si loo kordhiyo hal ayaa heysta fursad uu sida jir a time yareeyo gudahood,"Waxay ku dar.
caawimo app ah aad iska ilaawaan karaa muraayadaha reading aad?
Google Glass - Dadka First Qabtay
20965	4 Qodobka, shukaansi, Ian Sample, qaybta Main, shukaansi Online, Psychology, Relationships, Science, The Guardian-ka, shootali, news UK
← Lulataaye Tassna waxaa Virtual Imaatinka Dyson bilaabay daahir Cool Link Air miira →